Ilhaan Cumar oo markale farqaha ku dhaggan Sacuudiga iyo xulafadiisa - BBC News Somali
Ilhaan Cumar oo markale farqaha ku dhaggan Sacuudiga iyo xulafadiisa
13 Juunyo 2019
Lahaanshaha sawirka NBC
Image caption Ilhaan Cumar ayaa eedeyn culus u jeedisay Sacuudiga
In muddo ahba waxaa soo baxayay warar ku saabsan in khilaaf xooggan uu ka dhaxeeyo Ilhaan Cumar iyo dowladda Sacuudi Carabiya, waxayna warbaahintu isla dhex marayeen in dalalka Khaliijka ay wadeen ol'ole ka dhan ah siyaasiyadda Soomaali-Mareykanka ah.
Gabadhan oo ah wakiilka laga soo doortay gobolka Minnesota ee aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa khudbad ay dhawaan ka jeedisay golaha ku sheegtay arrimo xasaasi ah oo ku saabsan maamullada boqortooyooyinka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Hadalkan ayey Ilhaan Cumar ku xustay eedeymo waaweyn oo ka dhan ah labada dowladood, iyadoo ku tilmaantay inay si toos ah u taageeraan kooxaha loogu yeero argagixisada.
"Arrin sir ah ma aha in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ay yihiin xukuumado qallafsan oo xad gudubyo sameeya, waxayna tacaddiyadooda kusii fidiyaan dalalka kale ee caalamka. Waxay si toos ah iyo si dadban u burburiyaan dhaqdhaqaaqyada dimuqraadiyadda ee dibadda," ayey tidhi Ilhaan.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey xustay arrin kale oo lama filaan ku noqotay dad badan, taasoo qeyb ka ah eedeynteeda.
"Waxaa kale oo aan aaminsanahay in dowladahan ay maal galiyaan kooxaha argagixisada, waxaanna maqalnay inay hubka Mareykanka u sii gudbiyaan kooxda Al-Qaacida".
Ilhaan Cumar oo Ra'iisulwasaaraha Hindiya eedayn u jeedisay
Image caption Ilhaan Cumar oo ka hadleysay Koongareeska
Shabakadda Al-Qaacidda ayaa ah urur uu Mareykanku dagaal kula jiray in ka badan 20 sano, waana kooxdii sheegatay mas'uuliyadda weerarkii khasaaraha badnaa ee lagu bartilmaameedsaday daaraha Mareykanka 11-kii bishii Sitembar ee sanadkii 2001-dii.
Hadalka Ilhaan Cumar ayaa u muuqda mid sii xoojinaya dagaalka ka dhaxeeya iyada iyo dowladaha ugu tunka weyn khaliijka, kuwaasoo ay sheegtay in Mareykanku uu la leeyahay xiriir aan sida saxda ah ku saleysneyn.
Xildhibaanadda ayaa sidoo kale khudbaddeeda ku sheegtay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay yihiin dalal Mareykanka u keenaya dhibaatooyin dhinaca amniga ah.
"Waxaan aaminsanahay in haddii aan Sacuudiga iyo Imaaraadka ku aaminno ammaankeenna iyo inay argagixisada naga difaacaan ay la mid tahay sidii adigoo qof tuug ah ku aamintay dukaankaaga", ayey tidhi Ilhaan Cumar.
Dhawaaqa kasoo yeeray Ilhaan ayaa kusoo aaday xilli uu Mareykanku hub balaayiin doolar ah ka iibiyay Sacuudi Carabiya.
Ma aha markii ugu horreysay ee Ilhaan ay eedeymo culus u jeediso dalalka Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, mana aha markii ugu horreysay ee ay arrimahooda qabsadaam mowduucyada hore ee warbaahinta.
Goor sii horreysay ayey Sacuudiga iyo Imaaraadka ku eedeysay inay mas'uul ka yihiin xaaladda ka jirta dalka Yemen.
Warnaahinta Khaliijka ma loollan ayay kula jirtaa Ilhan Cumar?
Image caption Ilhan Omar
Warbaahinta Dowladaha Khaliijka qaarkood ayaa la sheegay inay loollan adag kula jiraan haweenka muslimiinta ah ee ku biiray aqalka Koongareeska Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar.
Tan iyo markii ay dhacday doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka, warbaahinta garabka Midig ee dalalkaasi ayaa bartilmaameed ka dhigtay Ilhaan Cumar, oo ah siyaasiyadda xisbiga Dimuqraaddiga ee Soomaaliya ka soo jeedda, isla markaana xijaabka xirata.
Haweeneydan oo garab ka heleysa xisbigeeda ayaa u xusul duubeysa in meesha laga saaro sharci 180 sano jirsaday oo aqalka Koongareeska ka mamnuucaya in ay soo galaan dadka uu madaxa u daboolan yahay.
Baadari lagu magacaabo E.W. Jackson oo ka mid ah dadka u hadla xisbiga Jamhuuriga Mareykanka ayaa isagoo ka jawaabaya isku dayga ay siyaasiyiinta Dimuqraaddiga ku doonayaan in xijaabka lagu galo aqalka hoose waxa uu raadiyaha ka sheegay in dadka Muslimiinta ah ay doonayaan iney Koongareska ka dhigaan "Jamhuuriyad Islaami ah".
Daawo: Ilhaan Cumar oo ka hadashay dhaarinteeda
Ilhaan Cumar ayaa ku guulaysatay isreebreebka musharraxnimada Xisbiga Dimuqraadiga.
Hase ahaatee, gudaha Mareykanka oo kaliya ma aha meelaha uu ka imaanayo dagaalka lagula jiro Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib, oo iyadana ah gabar muslim ah oo asal ahaan ka soo jeedda Falastiin, balse waxaa jira dagaal kale oo dibadda uga imaanaya.
Weerarro la soo qaban qaabiyay ayaa looga soo qaaday dalalka kala ah Sacuudi Carabiya iyo dalka ay xulafada yihiin ee Imaaraadka Carabta.
Doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa sare u sii qaadday shaki xooggan oo ay warbaahinta bariga dhexe ka muujinayeen siyaasiyiinta u doodda xuquuqda dadka ee ka howl gala Mareykanka.
Hay'adaha Warbaahinta ee la dhacsan hannaanka maamulka dowladaha Khaliijka ayaa marar badan ku cel celiyay eedeymo ay u jeedinayeen Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib, iyagoo sheegayay iney labadaas gabdhood ee hadda ka tirsan Koongareska si toos ah u taageeraan ururka Ikhwaanul muslimiin ee laga mamnuucay dalka Masar.
Ururkaas ayaa sidoo kale cadow la ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.